သုံးနှုန်းမှတ်သားဝေါဟာရများ (၂၆) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on February 14, 2014 at 12:45 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
၂။ to become angry စိတ်ဆိုးလာသည်။ ဒေါသထွက်လာသည်။
get angry/get mad - စိတ်ဆိုးသည်။ ဒေါသထွက်သည်။
He tends to get angry if he loses at tennis.
get angry/get mad + at - တစ်ယောက်ယောက်အားဒေါသထွက်သည်။ စိတ်ဆိုးသည်။
Just calm down. There’s no need to get mad at me.
*** ခံ့ညားသည့်အရေးတွင်မှလွဲ၍ ‘become angry’ ဟုမသုံးပါနှင့်။ Get angry နှင့် get mad သည်သာသုံးလေ့ရှိသည့်အသုံးများဖြစ်သည်။
lose your temper - ဒေါသမထိန်းနိုင်ဖြစ်သည်။
Donald doesn't have much patience — he often loses his temper.
ဒေါ်နယ်ကသိပ်စိတ်မရှည်ဘူး။ မကြာခဏ စိတ်မထိန်းနိုင်ဘဲဒေါသထွက်တတ်တယ်။
“I've told you already," said John, trying hard not to lose her temper:
“မင်းကိုငါပြောပြီးသားပဲ။ သူစိတ်မဆိုးအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်လို့။” ဟု ဂျွန်မှပြောသည်။
lose your temper + with - ( ~ နဲ့/ကို ဒေါသထွက်သည်)
Whatever you do, don't lose your temper with the students — you'll only make things worse.
ဘာပဲလုပ်လုပ် ကျောင်းသားတွေကို အမျက်မထွက်မိစေနဲ့။ အဆိုးပဲဖြစ်စေလိမ့်မယ်။
throwatantrum - ၀ုန်းဒိုင်းကြဲခြင်း၊ ဒေါသူပုန်ထခြင်း
လိုချင်တာမရသဖြင့် ကျယ်လောင်စွာအော်ဟစ်မည်တမ်းသည်။ အထူးသဖြင့် ကလေးများ၏အပြုအမူနှင့်သုံးသည်။
Josie threwatantrum in the supermarket again today.
ဂျိုစီကတော့ ဒီနေ့ စူပါမားကတ်ထဲမှာ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲခဲ့ပြန်ပြီ။
၃။ behaving in an angry unfriendly way ဒေါသနှင့်စိမ်းကားသည့်အပြုအမူ။ မလိုလားသည့်အပြုအမူ
bad-tempered [adj] - ရန်လိုသော။ စိတ်တိုလွယ်သော
Our teacher wasabad-tempered old woman.
Pressure at work was making her more and more bad-tempered.
inabad mood - စိတ်အလိုမကျဖြစ်နေသည်။ ဒေါသထွက်နေသည်။
တစ်ခုခုကြောင့် စိတ်ဆိုးကာ ရန်လိုသည့်အသွင်ဖြစ်နေသည်။
Why's Jenny in suchabad mood this morning?
put sb inabad mood (=make someone annoyed) - တစ်ယောက်ယောက်အား စိတ်တိုစေသည်။ အလိုမကျဖြစ်စေသည်။
I missed the bus, which put me inabad mood for the rest of the day.
grumpy/grouchy [adj] - ကွဲမြီးတိုသော။ အလွယ်တကူမြည်တွန်တောက်တီးတတ်သော။
Her illness made her grumpy and impatient.
ရောဂါက သူ့ကို စိတ်မရှည် မည်တွန်တောက်တီးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတယ်။
Dan is always tired and grouchy in the mornings.
မနက်ခင်းတွေဆို ဒန်က အမြဲတမ်းနွမ်းနယ်နေပြီး မကျေမနပ်ဖြစ်နေတော့တယ်။
grumpy - grumpier - grumpiest
grouchy - grouchier - grouchiest
moody [adj] - စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်သော၊ စိတ်ဆိုးလွယ်သော။ ဒေါပွသော။
moody teenagers စိတ်အပြောင်းအလဲမြန်သည့်ဆယ်ကျော်သက်များ
Tara had been moody and difficult all day.
တာရာဟာ တစ်နေ့လုံး ဒေါပွနေပြီး ဆက်ဆံရခက်နေတယ်။
moody — moodier — moodiest
irritable [adj] - စိတ်ဆတ်သော။ အရေးမပါသည့်ကိစ္စလေးများတွင်ဒေါသထွက်လွယ်သော။ ကသိကအောက်ဖြစ်သော။
The heat was making me irritable.
Zoe hadn’t had much sleep and was feeling tired and irritable.
ဇိုးသည် အိပ်ရေး၀၀မအိပ်ခဲ့ရဘဲ မောပန်းကာ စိတ်ဆတ်နေသည်။
touchy [adj] - အကဲဆတ်သော။ အထိမခံသော။
အထအနကောက်တတ်သဖြင့် စကားပြောလျှင်သတိထားပြောရသူ။ တစ်ခုခုတွင်အထိမခံဖြစ်တတ်သူ အကြောင်းပြောသည့်စကားလုံး။
She always getsalittle touchy when you ask her about her parents.
သူ့မိဘတွေအကြောင်းမေးတိုင်း သူ နည်းနည်းအထိမခံဖြစ်တတ်သည်။
touchy + about
Don't say anything about his bald patch — he’salittle touchy about it.
သူ့ထိပ်ပြောင်ကွက်နဲ့ပါတ်သက်ပြီးဘာမှသွားမပြောနဲ့။ သူက အဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ နည်းနည်းအကဲဆတ်တယ်။
touchy - touchier – touchiest
sulky [adj] - စိတ်ကောက်သည်။ သုန်မှုန်သည်။ စူအောင့်သည်။
အလိုမပြည့်သဖြင့် စကားမပြောဘဲ မျက်နှာအမူအယာတွင်ပေါ်လွင်နေသည့်ဒေါသ၊ စိတ်ဆိုးမှုကိုပြသည့်စကားလုံးဖြစ်သည်။
a sulky little boy who refused to play with the other children အခြားကလေးများနှင့်ကစားရန်ငြင်းဆန်သည့် စိတ်ကောက်နေသည့်ကလေးငယ်
sulky — sulkier — sulkiest
sulkily [adv] - စိတ်ကောက်စွာ။ သုန်မှုန်စွာ
She just sat in the corner and stared sulkily at the floor.
သူမသည် ထောင့်တွင်ထိုင်ကာ ကြမ်းပြင်အားသုန်မှုန်စွာ စိုက်ကြည့်နေတော့သည်။